အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ ပထမဆုံး လူမည်းပုဂ္ဂိုလ်
ကြယ်လေးပွင့်အဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအော်စတင်ဟာ တိကျပြတ်သားတဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဂုဏ်သတင်းကောင်းရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် (Senate) က သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန် အဆိုပြုထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း လွိုက်ဒ်အော်စတင်ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ရာ ၎င်းဟာ နိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက် ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကို ဦးဆောင်မယ့် ပထမဆုံး အာဖရိကန်-အမေရိကန်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
(သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် လွိုက်ဒ်အော်စတင်) (Photo: Lloyd Austin/Twitter)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအော်စတင်ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အဆိုပြုမှုအား သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ ဒီမိုကရက်နဲ့ အတိုက်အခံ ရီပတ်ဘလစ်ကင် နှစ်ဘက်လုံးမှ အမတ်များအစုက ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ထောက်ခံမဲ ၉၃ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂ မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်လေးပွင့်အဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအော်စတင်ဟာ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနကို ဦးဆောင်မယ့် ပထမဆုံး အာဖရိကန်-အမေရိကန်တစ်ဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတသစ်ဘိုင်ဒန် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာပင် ပါတီနှစ်ခုလုံးမှ လွှတ်တော်အမတ်တွေက ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကို အော်စတင် ဦးဆောင်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အော်စတင် ကျမ်းကျိန်နေစဥ်) (Photo: U.S. Dept. of Denfese)
အသက် ၆၇ နှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအော်စတင်ဟာ တိကျပြတ်သားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ဂုဏ်သတင်းကောင်းရှိသူဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာ စစ်မှုထမ်းသက်အတွင်း အမည်းစက်ကင်းခဲ့သူလို့ ဆိုပါတယ်။ ၎င်းဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်လျှောက် တပ်စွဲထားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်ကိုလည်း တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်စတင်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ရာထူးမှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတယ်။
(ပင်တဂွန်သို့ အော်စတင် ရောက်ရှိလာစဥ်) (Photo: U.S. Dept. of Denfese)
"ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ၂၈ ဦးမြောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာက ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပြီး အထူးအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပါ၊ ကျွန်တော်က ဒီရာထူးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ ပထမဆုံး အာဖရိကန်-အမေရိကန်ဖြစ်တာကို အထူးသဖြင့် ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ အလုပ်လုပ်ကြရအောင်" လို့ ၎င်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအော်စတင်က Twitter မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။